Madaxweyne Xasan Sheekh “Cid walba ayaa ka dheregsan ujeeddooyinka guracan ee kooxdan dembiileyaasha ah..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Xasan Sheekh “Cid walba ayaa ka dheregsan ujeeddooyinka guracan ee kooxdan dembiileyaasha ah..”
Madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si kulul u cambaareeyay falkii argagixiso ee ka dhacay afaafka hore ee garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in weeraradaasi aan marnaba loo joojin doonin dagaaladda lagula jiro argagaxisada ee Al-shabaab, islamarkaana weeraradaasi ku tilmaamay mid ay argagaxisadda ku doonayaan inay shacabka iyo dowladda niyad jebiyaan.
“Weerarkan waxashnimo ee kooxda argagixisada ay soo qaadeen waxaa ujeedkiisu uu ahaa in shacab badan lagu waxyeeleeyo, lana dhibaateeyo hawlaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed loogu adeegayo ee goobtaasi ka socda. Argagixisadu waxay doonayaan inay shacabka iyo dowladda niyad jebiyaan, taasina ma ahan suuragal, waayo cid walba ayaa ka dheregsan ujeeddooyinka guracan ee kooxdan dembiileyaasha ah ay leeyihiin oo ah inay nolosha u diidaan shacabka, burburna geystaan’’, ayuu yiri Madaxweynaha.
Waxaa uu madaxweynaha tacsi u diray Ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya, kuwa AMISOM, qoysaska iyo eheladii ay ka geeriyoodeen dadkii iyagoo waajibaadkooda gudanaya lagu dilay weerarkaasi, isagoo kuwa ku dhaawacmeyna u rajeeyay caafimaad deg-deg ah.
Madaxweynaha ayaa ammaan u jeediyay Ciidanka Qalabka Sida ee Soomaaliya iyo kuwa Nabad Ilaalinta ee AMISOM, oo mar walba u taagan inay sugaan amniga, cadowgana cashar u dhigaan.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hoosta ka xariiqay in dowladda ay ka go’an tahay sugidda amniga, ilaalinta shacabka iyo in ugu dambeyn cadowga laga sifeeyo goobaha yar ee ay ku dhuumaaleysanayaan.